PressReader - Ilanga: 2017-10-09 - LIHLEHLILE ELABAHOLE U-R10.6 MILLION NGEPHUTHA
LIHLEHLILE ELABAHOLE U-R10.6 MILLION NGEPHUTHA
Ilanga - 2017-10-09 - Izindaba - INTATHELI YELANGA
LIHLEHLISELWE umhla ziyisi-9 kuLwezi (November) icala labashadile, abakhokhelwe wuMasipala iDr JS Moroka u-R10.6 million, esifundazweni iMpumalanga, esikhundleni sika-R1.6 million ngomsebenzi abawenzile ngenkampani yabo.
INkantolo yesiFunda yaseMdutjana eSiyabuswa, ihlehlise leli cala elibhekene noMnu George Mabaso nowakwakhe, uNkk Maria Mabaso ngoLwesine olwedlule. Kababuzwanga ukuthi bayalivuma noma bayaliphika yini icala.
Ngesikhathi bevele kule nkantolo ngenyanga edlule, badedelwe ngebheyili ka-R10 000 umuntu emunye. NgoLwesine, uKpt Dineo Sekgotodi okhulumela oKlebe eMpumalanga, uthe uMnu Mabaso nowakwakhe bakhokhelwe imali engaphezulu kwefanele ngomsebenzi abawenzele umasipala ngenyanga edlule.
Uthe lo msebenzi bawenze besebenzisa inkampani yabo engadalulwanga - emuva kokuba bethole ithenda.
“Kwenzeke iphutha bakhokhelwa u-R10.6 million kwi-akhawunti yenkampani yabo, okuthe uma umasipala uzama ukuyibuyisa leyo mali, wafika itshe selome inhlama kwi-akhawunti.
“Uphenyo lwethu luthole ukuthi bavele bayithatha le mali bayidlulisela kwi-akhawunti eqondene nabo (hhayi eyenkampani). Bobabili abamangalelwa bangabaqondisi bale nkampani,” kusho uKpt Sekgotodi.
Le mali bayishushumbisa nje,
Uphenyo lwethu luthole ukuthi bavele bayithatha le mali bayidlulisela kwi-akhawunti eqondene nabo (hhayi eyenkampani). Bobabilii abamangalelwa...
bebazi kahle kamhlophe ukuthi kayifanele ukukhokhela umsebenzi abawenzile, ngokusho kukaKapt Sekgotodi. Uthi umasipala kawulivulanga icala ngokukhokhelwa kukaMnu Mabaso nowakwakhe le mali.